Mabasa 14 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
14 Zvino vava muIkoniyumu+ vakapinda pamwe chete musinagogi+ revaJudha, vakataura zvokuti vanhu vazhinjizhinji vevaJudha nevaGiriki+ vakava vatendi. 2 Asi vaJudha vasina kutenda vakakurudzira+ uye vakafurira mweya yevanhu vemamwe marudzi kuti vamukire hama.+ 3 Naizvozvo vakapedza nguva huru vachitaura noushingi uye vachishandisa simba raJehovha, uyo akapupurira shoko romutsa wake usina kukodzera kuwanwa nokubvumira zviratidzo nezvishamiso kuti zviitike nemaoko avo.+ 4 Zvisinei, vanhu vazhinji vomuguta vakakamukana, vamwe vakanga vachitsigira vaJudha asi vamwe vachitsigira vaapostora. 5 Zvino vemamwe marudzi nevaJudha nevatongi vavo, pavakaedza nechisimba kuti vavaitire zvakaipa nokuvatema nematombo,+ 6 ivo, pavakaziviswa nezvazvo, vakatizira+ kumaguta eRikaoniya, Ristra neDhebhe nenyika yakanga yakapoteredza; 7 uye ikoko vakaramba vachizivisa mashoko akanaka.+ 8 Zvino muRistra makanga mugere mumwe murume akanga akaremara makumbo, akanga akaremara kubvira achiri mudumbu raamai vake,+ uye akanga asati ambofamba. 9 Munhu uyu akanga akateerera Pauro paaitaura, uyo, paakaramba akanyatsomutarira uye achiona kuti aiva nokutenda+ kwokuti aigona kuporeswa, 10 akati nenzwi guru: “Simuka umire netsoka dzako uti twi.” Iye akasvetuka, akatanga kufamba.+ 11 Mapoka evanhu, achiona zvakanga zvaitwa naPauro, akashevedzera, mumutauro wechiRikaoniya achiti: “Vanamwari+ vava sevanhu uye vaburukira kwatiri!” 12 Vakabva vatumidza Bhanabhasi kuti Zeusi, asi Pauro Hemesi, zvaari iye akanga achitungamirira pakutaura. 13 Mupristi waZeusi, akanga aine temberi yakanga iri pamberi peguta, akauya nenzombe nehata dzemashizha kumagedhi uye akanga achida kupa zvibayiro+ aine mapoka evanhu. 14 Zvisinei, vaapostora, Bhanabhasi naPauro pavakazvinzwa, vakabvarura nguo dzavo dzokunze, vakasvetukira pakati peboka revanhu, vachishevedzera, 15 vachiti: “Varume, muri kuitirei zvinhu izvi? Nesuwo tiri vanhu+ vasina simba+ sezvamakangoitawo, uye tiri kukuzivisai mashoko akanaka, kuti imi mubve pazvinhu izvi zvisina zvazvinobatsira+ mutendeukire kuna Mwari mupenyu,+ akasika denga+ nenyika negungwa nezvinhu zvose zviri mazviri. 16 Muzvizvarwa zvakapfuura akabvumira marudzi ose kuti afambe munzira dzawo,+ 17 chokwadi, kunyange zvazvo asina kurega kuzvipupurira pakuti akaita zvakanaka,+ achikupai mvura+ inobva kudenga nemwaka inobereka zvibereko, achizadza mwoyo yenyu kwazvo nezvokudya nomufaro.”+ 18 Asi nokutaura zvinhu izvi havana kunyatsokwanisa kudzivisa mapoka evanhu kuti arege kuvabayira zvibayiro. 19 Asi vaJudha vakasvika vachibva kuAndiyoki neIkoniyumu vakanyengetedza mapoka evanhu,+ uye vakatema Pauro nematombo, vakamuzvuzvurudzira kunze kweguta, vachifunga kuti akanga afa.+ 20 Zvisinei, vadzidzi pavakamuunganira, iye akamuka, akapinda muguta. Pazuva rakatevera akabva naBhanabhasi vakaenda kuDhebhe.+ 21 Pashure pokuzivisa mashoko akanaka muguta iroro uye vawana vadzidzi+ vazhinji, vakadzokera kuRistra, Ikoniyumu uye kuAndiyoki, 22 vachisimbisa mweya yevadzidzi,+ vachivakurudzira kurambira mukutenda vachiti: “Tinofanira kupinda muumambo hwaMwari nomumatambudziko mazhinji.”+ 23 Zvakare, vakagadza varume vakuru+ nokuda kwavo muungano imwe neimwe uye, vachinyengetera pamwe chete nokutsanya,+ vakavaisa kuna Jehovha+ wavakanga vatenda. 24 Vakaenda nokuPisidhiya, vakasvika kuPamfiriya,+ 25 uye, pashure pokutaura shoko muPega, vakaburukira kuAtariya. 26 Vachibva ikoko vakaenda nechikepe kuAndiyoki,+ kwavakanga vagamuchidzwa kumutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari nokuda kwebasa ravakanga vaita kwazvo.+ 27 Pavakanga vasvika uye vaunganidza ungano, vakabva varondedzera+ zvinhu zvizhinji izvo Mwari akanga aita achivashandisa, uye kuti akanga avhurira vemamwe marudzi suo rokutenda.+ 28 Naizvozvo vakapedza nguva huru nevadzidzi.